MOMBA ANAY - Aquagem Pool Pump Frequency Inverter
Aquagem Electric Limited dia dobo Accessories mpamatsy monina ao Panyu, Guangzhou, Shina. Izahay nanolo-tena ho fampandrosoana sy marani-tsaina sy ny heriny manome famonjena vokatra ho an'ny Global mpanjifa, ny manomboka amin'ny, dia miova ho an'ny tokan-tena matetika fiara haingam-pandeha dobo paompy.
Ny asa fitoriana dia ny mpampiasa dobo mankafy foana ny tsy hanahirana sy ny tombontsoa nitondra ny mahay ny teknolojia sy ny hampihena ny gazy karbonika tongotra atao pirinty, izany manompo ho toy ny tari-dalana ny asa nanerana fizotry ny R & D, famokarana, varotra, varotra & fanompoana, sns
Customer zava-nitranga dia ny zava-drehetra. Dobo rehetra mendrika ny mpampiasa vola-mahomby + tsara toetra + azo itokisana rafitra dobo, mba ho indrindra avy tao amin'ny fampiasam-bola sy mankafy ny fiainana dobo fianakaviana.
Ny fikatsahana ny tsara kokoa mpanjifa traikefa amin'ny vokatra toy ny mpanova matetika, paompy isan-karazany sy ny asa fanompoana dia mandrakizay ao amin'ny Aquagem antony manosika, izay nanao ny asa manan-danja.
Ao amin'ny orinasa izay tena mameno ny manodidina mpanjifa traikefa, ara-teknika R & D tsy afa. Izany rehetra mikasika ny fikarohana sy ny fampitomboana ny vokatra mila mpanjifa, izany fomba fisainana amin'ny fiverenana dia mitondra antsika ho tsara kokoa ny zava-baovao hevitra ao amin'ny matetika inverter sy mitempo manosika ny fampandrosoana isika ankehitriny.
Tarihan'ny lehiben'ny injeniera 6 izay fahaizany any inverter VFD sy ny teknolojia, mirehareha isika ny hanana mafy R & D ekipa izay niakatra hatrany amin'ny hevitra vaovao.
Rehetra entana nandalo ny henjana tsara maso alohan'ny delivery, dia misy manohitra ny harafesina, anti-hamandoana, insulation fitsaboana ho an'ny elektronika zana-kazo, herinaratra fonction fitsapana ho an'ny manasa-vita vokatra, be taona fitsapana amin'ny 60 ambaratonga centigrade sy feno fampisehoana maso amin'ny vita vokatra, simulate vokatra eo amin'ny dingan'ny Intensive fitsapana samihafa niresaka momba mety hisy vokany eo vokatra tena be taona eo ambanin'ny toe-javatra.